Isabella Arantes: Xiddiga reer Brazil ayaa guuleystay adduunka | TeraNews.net
Isabella Arantes: Xiddiga reer Brazil ayaa guuleystey adduunka
qoraaga Tera news La daabacay 12.04.2019
Joornaaladaha qurxinta ahi hadda kuma jiraan isbeddellada - si ay u caan noqdaan, u rakibto Instagram oo u soo jiidato dareenka dadweynaha. Moodellada Isabella Arantes (Isabella Arantes) ayaa sidoo kale ka soo jeeda Brazil. Gabadhu waxay daabacdaa sawirradeeda iyo qalabkeeda ku saabsan dharka.
Isagoo ka diiwaangashan 2013 wax yar oo caan ah wakhtigaas shabakada bulshada, Isabella waxay heshay macaamiishooyinka dhabta ah ee 2019 50 sanadki 000. Xiddiga reer Brazil ayaa maalin walba sawirro ku wadaaga shabakada bulshada isla markaana la wadaagaa dareenka dharka. Gaar ahaan, fashionista wuxuu matalaa astaanta La Bella, oo lagu meeleeyay wax soo saarka dharka labiska.
Isabella Arantes: nolosha shaqsiga
Moodhuhu wuxuu ku dhashay 29 bisha Juun 1997 ee sanadka (iyadu waa sanadka 21). Marka loo eego horoscope - kansar. Goobta dhalashada iyo deganaanshaha - Brazil. Hiwaayadaha - qoob-ka-ciyaarka. Waxaa la ogsoon yahay in xiddigga reer Brazil uu qeyb ka ahaa kooxda qoob ka ciyaarka ee Domingao do Faustao. Xaaladda guurka - ma guursan. Haddii aad aamminsan tahay warbaahinta, Isabella Arantes waxay ku faantaa quruxdeeda xiddigga caanka ah ee reer Brazil - da da da da Silva. Album album-ka ah oo ku yaal Instagram, qeybta "shaqsiyan", waxaa ku yaal sawiro Isabella oo ay la socoto adeerkeed.
Isha ugu weyn ee dakhliga waa shabakadda bulshada ee Instagram. Magaalada caasimada ah ee moodelku waa ku dhawaad ​​100 kun oo doolar. Sannadkii 2019 ee Isabella wuxuu isu beddelay guul. Qaabku wuxuu ka mid ahaa tobanka hablood ee ugu quruxda badan meeraha. Stylists waxay ku doodayaan in xiddigga cusub ee ka yimid Brazil mustaqbal wanaagsan leeyahay.
Citroen Skate - madal guur -guura
Jarmalka ayaa qaaday tallaabo ay ku taageerayaan milkiilayaasha taleefannada casriga ah
Gacan -gacmeedyada Smartwatches -ka iyo jijimooyinka jirdhiska ayaan caan u ahayn sida aan u malayno
Waa maxay sababta aad ugu baahan tahay inaad iibsato qalab xirfad leh